प्रतिवाद अधिनायकवादीको लामो भाषण
बाह्रखरी - प्रतीक प्रधान बिहीबार, फागुन ६, २०७७
काठमाडौं । अहिले देशमा सर्वत्र आन्दोलन छ । नेताहरू एक से एक भाषण गर्दैछन् । तर, नेपाली नेताहरू किन लामो र कर्कश भाषण गर्छन् ? किन उनीहरूले जनतालाई दिन चाहेको सन्देश छोटो समयमा दिन सक्दैनन् ? किन स्रोताको समयको बरबादी र धैर्यको परीक्षा लिन्छन् नेताहरू ? आउनुस, आजको प्रतिवाद कार्यक्रममा यिनै लामा र छोटा भाषणहरूमा केन्द्रित गरौँ ।
कुनै व्यक्तिलाई समूहमा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भने असहज महसुस हुन्छ र सकभर आफ्नो वक्तव्य छोटै समयमा टुंग्याउँछन् । कसैलाई भने जति ठूलो जनसमूदाय देख्यो त्यति लामो भाषण गर्ने जाँगर आउँछ ।
कसैलाई आफूले जति धेरै बोल्यो स्रोता त्यतिनै खुसी हुन्छन् भन्ने लाग्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सकभर लामो बोल्न पाउँदा ठूलो उपलब्धि गरेको जस्तो लाग्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रतिष्ठित पत्रिका फरेन पोलिसी डट कममा सन् २०१३ मा प्रकाशित एक लेखका अनुसार कम्युनिस्ट र सर्वसत्तावादी नेताहरूमा धेरै लामो भाषण गर्ने र तिनमा टेलिभिजनमा देखिने मोह अलि बढी नै हुन्छ । आफूलाई रुची भएको विषयमा अरुको समय खेर जान्छ वा जाँदैन भन्नेमा अधिनायकवादी सोचका नेतालाई मतलब नभएर पनि यस्तो गरेको हुन सक्छ ।
सन् २०१३ अप्रिलमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पुरै पाँच घण्टा जनताका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिएर बिताए । तर देशको प्रमुख टेलिभिजन च्यानलमा यति लामो समय खर्च गरेर त्यसलाई पनि एक रेकर्ड भएको बताएर उनका समर्थकले आनन्द लिए ।
हेरौँ– यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको कार्यक्रम प्रतिवाद
बिहीबार, फागुन ६, २०७७ मा प्रकाशित
१३ हजार पत्रकारको विवेकको परीक्षा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले स्थायी सरकारका लागि विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले बहुमत... १४ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गर्ने भएको छ । अन्तिमसम्म केन्द्रको निर्णय पर्खिएको कांग्रेसले अन्तत:... ३१ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का कर्णाली प्रदेशका खनाल–नेपाल समूहका सांसद करवीर शाहीले फ्लोर क्रसको हल्ला चलाइँदा चोट परेको बताएका छन् ।... ३७ मिनेट पहिले
काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत दिन सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकलाई... ५८ मिनेट पहिले